Maitiro Ekuvandudza Hunyanzvi Hwako hwekunyora Martech Zone
Maitiro Ekuvandudza Hunyanzvi Hwako hwekunyora
China, June 18, 2020 Muvhuro, Kukadzi 1, 2021 Douglas Karr
Kana iwe waverenga bhuku rangu kwemakore, ndinovimba kuti waona kuvandudzwa mukunyora kwangu. Chokwadi chinotaurirwa, mushure mekunyora bhuku uye zviuru zvezvinyorwa, ini ndichiri kunetsekana nezvakakosha zvekunyora - kusanganisira grammar, chimiro, uye kugona.
Se rukova rwekuziva munyori, kwandinotaura ndega ndichinyora zvandinotaura, ini ndinounza zvimwe zvakashata uye zvakanyanyisa kupereta uye grammatical zvikanganiso zvakaringana. Nekutenda, vaverengi vangu vakagamuchira zvakanyanya kushaikwa kwangu kwehunyanzvi hwekunyora uye ivo, pachinzvimbo, vanotarisa pane zviwanikwa zvandinogovana navo.
Izvo zvakati, chinhu chimwe chakandibatsira kunatsiridza kunyora kwangu… kunyora. Ini ndinonyora zvirevo zvebasa (SOWs) yetarisiro. Ini ndinonyora zviitiko zvekuyedza. Ini ndinonyora zvinyorwa pano. Ini ndinonyora nyaya dzekutengesa. Ndinonyora zuva rese pasocial media. Ini ndinonyora masumo uye mibvunzo yemapodcast. Zvese zvandinonyora zvinoda chinangwa uye nzwisiso yepakati uye inotarisirwa vateereri.
Nekufamba kwenguva, ndinotenda ndakavandudza zvakanyanya asi handisati ndiri nyanzvi. Muchokwadi, kana zvasvika pakugadzira chena chena kana chakakosha zvemukati, ini ndichiri kutsvaga mamwe anoshamisa makopi vanyori vanoita rinoyevedza basa pane yega chidimbu chavanopa. Kuranga kwekutsvaga, kuteerera, uye kutarisisa kune ava vanyori kunoshamisa. Ndine ruremekedzo rukuru kune hunyanzvi hwavo.
Izvi infographic, Nzira 29 dzekuvandudza Unyanzvi Hwako hwekunyora, kubva kuEnchanting Kushambadzira ruzivo kuronga, maitiro, chimiro, kugona, uye maitiro ekutanga.
Heano mutsara wakanyorwa weiyo infographic:
Chikamu 1: Kunyora Kudzidzira
Gadzira yako huru kunyora kushaya simba. Chii chaizvo chaunoda kuvandudza? Semuenzaniso, iwe ungangoda kutarisisa kusarudza mazwi akakodzera kana kunyora mitsara yakapfava.
Verenga basa revamwe vanyori kuti vanzwisise mashandisiro avanoshandisa nzira dzekunyora. Kana iwe uchida kunyora nekureruka, dzidza Hemingway's Murume Mukuru neGungwa. Kana kana iwe uchida kuvandudza sarudzo yeshoko, ona mashandisiro anoita Ray Bradbury zviito zvine simba in Zen muUnyanzvi hwekunyora; unganidza yako yese yaunoda mienzaniso mu faira swipe- muunganidzwa we kunyora mienzaniso kudzidza kubva.
Dzidzira yakasarudzika nzira yekunyora, uye enzanisa kunyora kwako kune iyo mienzaniso mune yako swipe faira, kuti iwe ugone kuona maitiro ekuvandudza kumberi.
Buda munzvimbo yaunogara — usashandise mienzaniso iyi kuti uzviise pasi; pachinzvimbo, zviedze kuti uve nani uye unakirwe neruzivo rwekudzidza--kurudzira kukura kwepfungwa.
Chikamu 2: Kunyora Kuronga
Uri kunyorera ani? Vanyori vakanaka vane hutano hwezvirwere muvaverengi vavo uye vanonzwisisa zviroto zvavo, kutya, uye zvakavanzika zvishuwo.
Ndeupi dambudziko remuverengi iro chinyorwa chako chinobatsira kugadzirisa? Kana ndeipi chinangwa chaunobatsira kuzadzisa? Zvemukati zvakanaka zvine chinangwa chimwe chakajeka- kukurudzira muverengi kuti ashandise rairo yako.
Ndeipi nzira yemugwagwa yekubatsira vaverengi vako kugadzirisa matambudziko avo kana kuzadzisa zvinangwa zvavo? Iyo nzira yemugwagwa ndiyo hwaro hwechinyorwa chakajeka uye chine musoro.
Chikamu 3: Chinyorwa Chekunyora
Musoro wenyaya une simba inoshandisa mazwi esimba kana nhamba kukwezva kutariswa munzvimbo dzakabatikana dzemagariro enhau, uye inotaura nezvebhenefiti yekukwezva vateveri kuti vadzvanye kuverenga zvimwe.
Kuvhura kunotyisa anovimbisa vaverengi iwe unozobatsira kugadzirisa dambudziko kuti vanzwe kukurudzirwa kuverenga pamusoro.
Muviri wakakosha inoratidza, nhanho nhanho, maitiro ekugadzirisa dambudziko kana kuzadzisa chinangwa.
Kuvhara kwekukurudzira svetuka inotanga vaverengi mukuita-iwe unongova chiremera chechokwadi apo vaverengi vanowana musiyano wezano rako raunovapa.
Chikamu 4: Kunyora Matekiniki
Shandisa iyo-kosi yekudya chirongwa ku gadzira kuyerera kunonzwisisika pasina zvinokanganisa, saka vaverengi vanoramba vari mugwara.
Dzidza mashandisiro mutauro wakajeka kuita zvisingabvumirwe mazano kongiri saka vaverengi vanobata uye kurangarira meseji yako zviri nyore.
Dzidza kunyora mitsara-yakakura, yakapusa, uye ine chirevo mitsara-mutsara wakanaka ndicho chinhu chikuru chekunyora kwakanaka.
Compose kuchinja kwakatsetseka saka vaverengi vanotsvedza vasingashande kubva pamutsara kuenda pamutsara, uye kubva pandima kuenda pandima
Dzidzira maitiro nyora zvakajeka uye muchidimbu saka meseji yako inosimba.
Tsvaga maitiro ekudzivirira mashoko asina simba, aigona, uye cliches; uye zvinonhuwira kunyora kwako ne simba mazwi kusanganisira zvirevo zvemazwi.
Kunzwisisa hwaro hwe keyword research uye pa-peji optimization kuwedzera organic yekutsvaga traffic.
Chikamu 5: Ruzivo rwekunyora rwemberi
Dzidza maitiro ekushandisa iyo zoom-in-zoom-out technique kuruka nyaya diki mune zvako zvemukati.
Tsvaga maitiro ekuti fambisa nyaya dzako uye vaverengi vezvirauro nema cliffhanger madiki.
Cook up matsva madimikira kuwedzera kuravira kune zvadzokororwa uye zvinofinha misoro.
nyora mitsara mirefu pasina kupera mweya, uye tsvaga mashandisiro mutinhimira kuisa mimhanzi mukunyora kwako.
Edza ne sarudzo yemazwi uye edza zvimwe matauriro ekutaurasaka vaverengi tanga kuziva izwi rako.
Chikamu 6: Maitiro ekunyora
Ita kunyora sarudzo, uye nguva yebhuku mukarenda yako zvekunyora — kana ukasaronga nguva yekunyora, saka hazvizoiti.
Seta chinangwa chidiki- sekunyora ndima imwe chete kana kunyora kwemaminitsi gumi pazuva, saka zvinenge zvisingaite kuti usanyora.
Gadzira hukama hune zvibereko neako kutsoropodza mukati, saka iwe unogona kuve unowedzera kufara uye kuwanda munyori.
Kutanga kunyora, kunyangwe kana usinga inzwa kukurudzira-Muse wako uchapa mubairo wako wekushanda nesimba uye mazwi ako anotanga kuyerera.
Bvisa zvinovhiringidza uye dzidzira maitiro ekutarisa-Kutarisa ndiko kugadzirwa kwako kwakanyanya-simba.
Gadzira iyo maitiro ekunyora mumatanho-Lineline, yekutanga dhizaini, kudzokorora, yekupedzisira gadziriso - uye nekuparadzira iro basa kwemazuva akati wandei kuti iwe utore mukana wekuparadza; dzokorora kunyora kwako nemeso matsva kuti iwe ugone kuzviita zvirinani.
Tags: advanced kunyoragutsikanatsvakiridzo yezvirimosei kutikunyoratsika dzekunyorakunyora tsvakiridzokugona kunyora